Iyo Domino Project: Vimba Iwe Pachekunyora Dambudziko | Martech Zone
Chipiri, May 31, 2011 Svondo, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Sezvo fan of Iyo Domino Project, Ini ndichave ndichitora chikamu mu Vimba Iwe pachako Kunyora Dambudziko, inova iri "chirongwa chepamhepo uye kunyorera kwemazuva makumi matatu chinokukurudzira kuti utarise mukati uye uvimbe newe." Zuva rega rega, ini ndinogashira yekunyora kukurumidza kuburikidza e, iyo yandinogona kutumira pane yangu blog, nyora mune yangu jenareta, nezvimwe .. Munyika yemakambani blogging, isu dzimwe nguva tinozvirasa pachedu kune ayo mabrands atiri kuedza kutengesa zuva rega rega. Ini ndinofunga iyi purojekiti inzira huru yekupinda mukunyora kwako pachako uye mabhurogu ayo anowedzera hunyanzvi hwekublogi hunyanzvi.
Kutanga nhasi, tanga kunyora chinyorwa kana excerpt nekutevera iyo inokurudzira inopihwa neakasiyana siyana vanyori inobatanidzwa nebasa iri. Joinha isu mune iri dambudziko, uye unzwe wakasununguka kugovera zvaunotumira nesu!